Okpuchi Mkpụrụ Igwe Mkpuchi - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Okpuchi Mkpụrụ Igwe Mkpuchi)
200W Led Street Pole Light Bulb Replacement 26000lm
Mgbasa Mkpụrụ Igwe Led Street bụ 130lm / w na ọtụtụ ugboro na-enwu gbaa karịa ìhè ọdịnala. Nke a 200W Led Street Light Replacement Bulbs nwere ike dochie 700 watt HPS / HID. Oghere Led Street Light Pole nwere ọla kọpa ma ọ bụ agba ojii na ihe ọkụ ọkụ na- eduzi n'okporo ámá okporo ụzọ na -eji maka ebe a na-adọba...
Led Street Light 200w bụ 26000 lumen mmepụta na ọtụtụ ugboro na-enwu gbaa karịa ìhè ọdịnala. Nke a Ebay Ebay Ebay 200w nwere ike dochie 700 watt HPS / HID. Led Street Light Haslls nwere ọla kọpa ma ọ bụ oji oji na ọkụ na- egbuke egbuke ọkụ ọkụ ọkụ ejiri ya mee ihe maka ebe a na-adọba ụgbọala, n'okporo ámá, ụlọ...
Okpuchi Mkpụrụ Igwe Mkpuchi Mkpụrụ Igwe Ọkụ Mkpụrụ Igwe Mkpụrụ Igwe 100W Na-acha Mkpụrụ Igwe Ọkụ Mkpụrụ Igwe Ọkụ Led 120 Watts Mkpụrụ Igwe Ọkụ Mkpuchi ọkụ nke 80W Mkpụrụ Igwe Ọkụ Na-acha Ọkụ